पशुपतिनाथको मन्दिर खोल्ने तयारी, कहिलेदेखि होला नियमित दर्शन ? — Motivatenews.Com
पशुपतिनाथको मन्दिर खोल्ने तयारी, कहिलेदेखि होला नियमित दर्शन ?
काठमाडौं – दर्शनार्थीका लागि पशुपतिनाथको मन्दिर खुला गर्ने तयारी गरिएको छ । साउन ७ सम्मको बन्दाबन्दी अवधि सकिएलगत्तै मन्दिर खुला गर्ने तयारी गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष डा। मिलनकुमार थापाले जानकारी दिए ।
“मन्दिर खुला गरिए पनि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट बच्न आवश्यक ठानिएका सबै पालना गर्दै गराउँदै मन्दिर खुला हुन्छ”, उनी भन्छन् । महादेवको अतिप्रिय महिना र प्रिय सोमबार मानिने यो महिना दर्शनार्थी एक पटक मात्र भए पनि दर्शन गर्न पाऊँ भनेर मन्दिर आसपास आइरहेका छन् ।